जहाँ बस्यो, त्यहीं सखाप – Enepali News
जहाँ बस्यो, त्यहीं सखाप
टवल/वीरगन्ज : भारतबाट नेपाल छिरेको सलह रूपन्देहीको चुरे क्षेत्रको फेदीमा बसेको छ। यो फट्यांग्रा सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा र बुटवल नगरका खेत, सहरी क्षेत्रका रूख र जंगलमा बसेको हो। तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदहमा मकै बालीमा क्षति पुर्‍याएको किसानले बताएका छन्।
यसको बथान शनिबार अपराह्न १ बजेतिर रूपन्देहीको आकाशमा देखिएको थियो। धुवाँको मुस्लोजस्तै देखिएको बथान बुटवलको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आसपासका पीपल, आँपको रूपमा बस्यो। केही बथान उत्तरतर्फ उडेर गयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको पीपलमा बसेको आधा घण्टामै रूख सिख्रै भयो। पीपलका कलिला पात सबै खाएर सलह अर्काे रूखमा सर्‍यो। ‘रातै देखिने गरी पीपलका हाँगामा बस्यो। आधा घण्टा जति बसेर उड्यो’, मन्त्रालयको सुरक्षार्थ बसेका सुरक्षाकर्मीले भने, ‘पीपलको हाँगा एकैछिनमा नांगै बनाए।’
रूपन्देहीमा मर्चवार र भैरहवामाथिको आकाशबाट सलह नेपाल पसेको थियो। जमिनभन्दा करिब ६० फिट माथिबाट उडेको सलह फेदीमा पुगेपछि रूखमा ओर्लिएको हो। बुटवलका गोलपार्क, सुक्खानगर, रामनगर क्षेत्रमा शनिबार साँझसम्म सलह रूखमै बसेका थिए।
‘कालै भुसुनाजस्तै आकाश ढपक्क ढाकेर आएको थियो’, गोलपार्कका नरेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले टिन ठटाएर छतको तरकारीमा बस्न दिएनौं। पीपल र आँपको बोटमा बसिरहेका छन्।’ रूखमा बसिरहेका बेला विषादी हान्ने व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
सलह देवदहको मकैबारीमा पनि पसेको छ। स्थानीयका अनुसार मकैको पात एकैछिनमा सखाप पारेको थियो। कलिलो पातमा बढी आक्रमण गरेको स्थानीयले बताए। ‘उखु, घिरौला, करेलाका पात र डाक्लासमेत सलहले सक्यो’, किसान श्यामप्रसाद देवकोटाले भने, ‘यो किराले केही बाँकी नराख्ने रहेछ।’ सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका किसानले टिन र अन्य भाँडा ठटाएर तरकारी बालीमा पस्न रोकेका छन्। कतिपयले आगो बालेर धुवाइँरहेका छन्।
बुटवलस्थित रामनगर ब्यारेकमा शनिबार बिहानै सलहजस्तै फट्यांग्रा देखिएको थियो। तर ती सलह नै भएको भनेर पुष्टि भएको थिएन। दिउँसो १ बजेदेखि रूपन्देहीको आकाशमा सलह उडेको देखिएको थियो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यसपछि मात्रै सलह नै भएको पुष्टि गरेको छ।
देवदहबाट मुर्गियासम्मको आकाशमाथि सलह उडेका देखिन्थे। यो क्षेत्र करिब ३५ किलोमिटर छ। देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगर क्षेत्रमा सलह देखिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताए।
सैनामैनामा नगर क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी छ। सैनमैनाको मकै बालीमा क्षति पुर्‍याइसकेको छ। नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले चुरे क्षेत्रको फेदमा रहेका गाउँको बालीमा क्षति पुर्‍याएको बताए।
प्रतिकिलो २० रुपैयाँ मूल्य तोकियो
प्रदेश ५ मा सलह भित्रिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको आकस्मिक बैठक बसेको छ। बैठकले सलह फैलिएको क्षेत्रमा विषादी छर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले धानको ब्याड जोगाउन प्लास्टिक, झुलले भए पनि छोपेर राख्न किसानलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
मन्त्रालयले सलह किराको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ तोकेको छ। किसानले किरा मारेर बुझाए प्रतिकिलो २० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय भएको प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताए। ‘पाकिस्तानले यही मोडल अपनाएर क्षति कम गर्न सफल भएको रहेछ’, उनले भने, ‘हामीले पनि त्यही उपाय अवलम्बन गरेका छौं।’
मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम नगरपालिकाले किसानलाई सार्वजनिक आह्वान गर्दै विषादी छर्ने तरिकासमेतको सूचना प्रवाह गरेका छन्।
गुल्मी र पाल्पामा जोखिम
सलहका लागि अहिलेको मौसम प्रतिकूल छ। उच्च गर्मी अथवा मरुभूमिजस्तो बालुवा भएको क्षेत्रमा यो किराले अन्डा उत्पादन र सन्तान वृद्धि गर्छ। प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले यसले सन्तान वृद्धि गर्न सक्दैन।’ सन्तान उत्पादन गर्न नसके धेरै क्षति नहुने अनुमान उनले गरे।
दक्षिणबाट उत्तरतर्फ हावा बहिररहेकाले रूपन्देहीबाट नेपाल छिरेको सलह गुल्मी र पाल्पामा बास बस्न सक्ने अनुमान उनले गरे। यो सलहले जहाँ बस्यो त्यहाँ अत्यधिक क्षति गर्ने गर्दछ। मन्त्रालयले पालिकामा रहेका कृषि शाखाका र जिल्लास्थित ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीलाई बासस्थान पत्ता लगाई विषादी छर्किन निर्देशनसमेत दिएको छ।
मालाथियान ३ एमएल १ लिटर पानीमा वा क्लोरोपाइरीफस नामक विषादी २ एमएल प्रतिलिटर पानीमा घोली किरामा पर्ने गरी स्प्रे गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ।
सलह धपाएर जोगियो धान
बाली सखाप पार्ने सलह नामको फट्यांग्रा पर्सामा पनि देखा परेको छ। पर्सागढी नगरपालिका–३ बढ्निहारमा लगाइएको चैते धानबालीमा शनिबार बिहान सलहको बथान देखा परेको हो। बिहान खेतमा काम गरिररहेका बेला बथानै १९ कट्ठा बालीमा आएर बसेको किसान अर्जुन नेपालले बताए।
पर्साको बढ्निहारमा शनिबार बिहान सलह धपाउँदै किसान अर्जुन नेपाल। तस्बिर : क्रान्ति शाह
‘बिहान म खेतमा आली लगाउन आएको थिएँ। त्यही बेला अचानक फट्यांग्राको झुन्ड मेरै चैते धान बालीमा आएर बस्यो’, उनले भने, ‘धानको डाँठ पनि खान थाल्यो। त्यसपछि बुवा, म र दाइ तीन जना मिलेर बालीमा बसेपछि फट्यांग्राको बथान नजिकको जंगलतिर उडेर गयो।’ तुरुन्तै धपाउन सफल भएकाले त्यति धेरै क्षति हुन नपाएको उनले सुनाए।
जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. रामचन्द्र यादवले उक्त घटनाबारे आफूले जानकारी पाएको बताए। ‘शनिबार बिदाको दिन भएकाले सरकारी गाडी चलाउन नमिल्ने भएकाले खेतसम्म जान पाइनँ’, उनले भने। यस विषयमा सम्बन्धित किसानसँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
Prev१ सय १४ वर्ष रहेको वृद्ध कोरोना परास्त गर्न सफल…!
Nextअब लकडाउन थप्ने कि ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्ने ?
विश्वभर ८२ लाख ८५ हजार बढी कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2509)
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2153)